‘सम्बन्ध बिग्रेकै बुझेर मोदी आए’ «
‘सम्बन्ध बिग्रेकै बुझेर मोदी आए’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्पन्न नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु)का प्रोफेसर डा. संगीता थपलियाले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको बुझेरै यति छिट्टो प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेको बताइन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी डा. थपलियाले कार्यपत्रमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा भारतीय सरकारलाई नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेर राम्रो नहुने र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिन पुगेकोले सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बुझाइ भएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, “सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता महसुस नगरेको भए मोदीको भ्रमण यति छिट्टै हुने थिएन ।”
सन् १९५० अघि नेपालीहरूको अध्ययनको थलो भारत थियो । उनीहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सघाएका पनि थिए । त्यसले भारतीय नेताहरूसँगको निकटतम सम्बन्ध बन्यो । अहिलेका प्रधानमन्त्री आफैं स्वतन्त्रतापछिको पुस्ताका हुन् । पुराना पुस्ताको युग समाप्त भइसकेकोले पुरानो बुझाइ पनि समाप्त भएको देखिन्छ । यसबारे बोल्दै उनले भारतमा अब सन् १९५० ताकाको बुझाइ नरहेको बताइन् । उनले नेपालमा पनि त्यो स्थिति नरहेको बताउँदै दुई देशबीचका जनता–जनताबीचको बुझाइलाई सरकार पक्षले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आदिवासी जनजाति मधेशी समुदायको बुझाइ नाकाबन्दीका बारेमा एकथरी रहेको र अन्यको एकथरी रहेको आफूले पाएको बताउँदै उनले दुईतिर केही समस्या बल्झाउने प्रवृत्ति रहेको जनाइन् । नेपाली मिडियाले भारतीय मिडियाले केही अवधारणागत विषयलाई ठीक ढंगबाट नउठाएकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा जटिलता थपेको वक्ताहरूको कथन थियो ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक दीपक अधिकारीले नेपाली मिडियाले किर्ती आजादको पुरानो अभिव्यक्तिलाई नयाँ भनेर प्रस्तुत गरेको जनाए । अधिकारीले भने, “ किर्ती आजादको यो भनाइ दुई वर्ष पुरानो हो । यो भनाइका कारण भाजपाले उनलाई निलम्बन पनि गरेको छ । तर, मिडियाले नयाँ भनेर उचालेपछि समस्या समाधान हुनको साटो बल्झिएको छ ।”
भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् विकसित दुईतिरका अवधारणाअनुसार सम्बन्धको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता सहभागीहरूको थियो । मोदीको भ्रमण कर्नाटकको चुनावलाई प्रभावित पार्न भएको विषयप्रति असहमति जनाउँदै थपलियाले चुनाव जित्न भएको भए बिहारमा पनि चुनाव भाजपाले जितेको हुने बताइन् ।
५० वर्षअघि हाम्रा लागि पटनाको विश्वविद्यालय थियो । तर अहिले हामीकहाँ दर्जनबढी विश्वविद्यालयहरू क्रियाशील छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी अध्ययन अध्यापनको ठोस र नियमिततामा कमी छ । त्यसैले भारतबाट अध्ययन गर्न विद्यार्थी आइरहेका छैनन् । एकआपसको सम्बन्धबारे बहस छलफलको अभावले गलत अवधारणा विकास भइरहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।
कार्यपत्रमा नाकाबन्दी मधेशीहरूले गरेको भन्ने उल्लेख थियो । त्यसमा सुधार गरी भारत सरकारले गरेको भनी संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
आदिवासी जनजाति मधेशी समुदाय